Ho hitanao fa tsy mivarotra MediaLight amin'ny Amazon.com izahay. Izahay manokana dia mividy vokatra marobe amin'ny Amazon, toy ny cartridges sy boky mpanonta, fa ny zavatra maro izay miasa amin'ny vokatra entam-barotra dia tsy mifanaraka amin'ny vokatra akany toa ny The MediaLight.
Amazon dia nanolotra ny kojakoja tsy mifanaraka izay mety hanimba ny jirantsika mitongilana ary ny lisitry anay dia norobain'ny mpivarotra vokatra hafa.
Raha mandroso ianao dia ho hitanao fa ireo tsikera rehetra momba ity vokatra ity dia natao ho an'ny MediaLight Quad, ilay maodelin'ny MediaLight teo aloha.
Ny olona sasany nividy vokatra MediaLight ary nahazo vokatra tsy misy ifandraisany. Ny sasany nandray levitra Tselatra LED izay nahitan'ny olona iray ny fotoana hivarotana tady $ 3 ambany kalitao ho an'ny vidiny lafo kokoa.
Mazava ho azy fa nandrakotra izany izahay fahavoazana avy amin'ny tolo-kevitr'ireo herinaratra Amazon diso eo ambanin'ny Warranty MediaLight, saingy olana mitohy tsy misy vahaolana io. Niezaka niara-niasa tamin'ny fanohanan'ny mpivarotra izahay mba hanesorana ireo tolo-kevitra tena ratsy, saingy tsy nahomby.
Mihevitra ianao fa afaka nividy MediaLight tena izy tany Amazon. Raha nampifandray ny famatsiana herinaratra 12v natolotry ny Amazon (etsy ambany) amin'ny LX1 na MediaLight ianao dia nendasinao avy hatrany ilay jiro bias satria mandeha amin'ny herinaratra USB ny jironay ary omena isa ny LX1 sy MediaLight.
Nisy olana lehibe hafa koa, nefa anisan'ireny ny ratsy indrindra.
Farany, tsy afaka nanome ny haavon'ny serivisy iankinan'ny mpanjifanay izahay, koa nitondra ny varotra sy ny fahatanterahana tao an-trano izahay. Ireo vokatra sy kojakoja rehetra ato amin'ity tranonkala ity dia azo antoka fa hiara-miasa amin'ny hazavanao tsy mitongilana ary alefa isan'andro avy amin'ny trano fanatobiana entana any NJ. Marina daholo ny lisitray. Handray izay nandidianao ianao. Ary ny tranonkalantsika dia misy fampahalalana mahasoa be dia be momba ny hazavana MediaLight, LX1 ary fitongilanana amin'ny ankapobeny.
Mbola afaka mandoa amin'ny Amazon Pay amin'ny tranokalanay ianao ary mankafy ireo fiarovana mitovy azonao rehefa manafatra amin'ny Amazon ianao, saingy tsy mivarotra ny vokatray amin'ny tranokala Amazon izahay, ary manantena izahay fa hanampy amin'ny fanazavana ny anton'izany izahay .